Ngaba uyidinga ngokwenene iwatchwatch?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba uyidinga ngokwenene iwatchwatch?
Ngaba uyidinga ngokwenene iwatchwatch?
Kule mihla yokunxibelelana rhoqo kwe-intanethi, sikhangela iindlela ezingakumbi kunye nezikulungeleyo ukuhlala kwi-intanethi. Lo mnqweno wokuhlala unxibelelana usizisele ii-smartwatches, ebezizezinto phantse ishumi leminyaka ngoku. Ziza ngeemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu, zineendlela ezahlukeneyo zokusebenza, kwaye okona kubaluleke kakhulu- ziiseti ezahlukeneyo zeempawu.
Kodwa umbuzo ngulo: ngaba uyayifuna ngenene iwatchwatch? Ngaba uluhlobo lomntu onokuthi usebenzise eli gadget, okanye ngaba kukuthenga okungafunekiyo? Le yimibuzo endiza kukunceda uphendule ngayo.
Eyona smartwatches ilungileyo onokuyithenga ngo-2021
Zisebenza njani ii-smartwatches?
I-smartwatch sisixhobo esinxitywa siselfowuni, isixhobo esincedisayo kwifowuni yakho, esiqulathe uninzi lwezithako ezifanayo kodwa kwesinye isimo kwaye sinenjongo eyahlukileyo. Ii-Smartwatches lulwandiso lwefowuni yakho, kwaye abanakho ukuyibuyisela.
IiSmartwatches zisebenza ngokudibanisa nefowuni yakho, ke zihlala zisazi ukuba kwenzeka ntoni. Eyona ndlela iqhelekileyo yokuqhagamshela ngeBluetooth, nangona ezinye zikwabonisa ezinye iindlela zonxibelelwano ezinjengeWi-Fi kunye neeSelfowuni.
Inqaku le-smartwatch lilula ngokulula- ukukugcina uqaphele kwizaziso zakho ngaphandle kwesidingo sokujonga kwi-smartphone yakho, ngelixa ikunika nokusebenza okungakumbi. Olu longezo lusebenzayo, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, luhlala lukwimo yokomelela komzimba kunye neempawu zokulandela umkhondo wempilo.
Kukho ii-smartwatches ezinokwenza iifowuni, kwaye iimodeli zeselfowuni zinokuba neenombolo zazo kunye nekhadi le-sim. Ezi zinokuba luncedo nabantwana kuba zihlala zisebenza kwaye zithambekele ekuphulukaneni nefowuni yazo. I-smartwatch yeselula iya kuhlala isesandleni sayo, ibonelele ngonxibelelwano kunye neempawu zokulandela umkhondo ezifunwa ngumzali ngamnye.
Ngaba i-smartwatch ilungile?
Ezinye ii-smartwatches zenziwa ngamaqela athile abasebenzisi engqondweni, kwaye abanye bazama ukubhenela ebantwini. Kuxhomekeka kwintengiso yabo ekujoliswe kuyo, abavelisi abohlukeneyo bayila iintlobo ezahlukeneyo zeewotshi.
Iimbaleki kunye nabathandi bokomelela komzimba banokuthatha ithuba uninzi lwemisebenzi yokulandela umkhondo kwimisebenzi ye-smartwatch. Kule mihla, ezi zinxibekayo zingalandelela ukubetha kwentliziyo yakho, zikufundise imithambo, ubale amanyathelo akho kwaye ubale ukuba zingaphi iikhalori ozitshisileyo okanye ukubaleka kangakanani namhlanje.
Iinkampani ezinje ngeFitbit kunye noGarmin zenza ukuba ii-smartwatches zisempilweni. Inkqubo ye- UFitbit Versa 2 ngumzekelo ogqibeleleyo weso sixhobo, enobomi bayo obubalaseleyo bebhetri kunye namandla amakhulu okulandela umkhondo. UGarmin ubonelela nge IVivoactive 4 , ikwangumzekelo obalaseleyo wewotshi ye-smart-centric smart.
Kodwa kukho ezinye iintlobo zabantu abafuna le gadget. Aba ngabasebenzisi abafuna ukuhlala bexhunyiwe, nokuba sele bexakekile. Ii-Smartwatches zibonelela ngendlela yokuba unxibelelane nezaziso zakho ngaphandle kokukhupha i-smartphone yakho epokothweni.
Inkqubo ye- Uthotho lweeApple 6 kwaye i I-Samsung Galaxy Watch 3 zama ukwenza konke. Banazo iiwotshi ezikrelekrele kwimarike kwaye babonelela ngebhalansi ekhethekileyo phakathi koyilo kunye nemisebenzi.
Ewe kunjalo, abanye baya kukhetha ii-smartwatches zodidi. Ezi zenziwe ukuba zibengaphezulu kwengxelo yefashoni kunegajethi kwaye zihlala zincama ukusebenza kweenkangeleko ezingcono kunye nokwakha umgangatho. Zisoloko zibiza kakhulu kwaye zenziwe okanye ngokudibeneyo kunye neempawu zodidi oluphezulu.
Ezo smartwatches zezi Iimodyuli eziDityanisiweyo ze-TAG Heuer uthotho kunye no-Apple Watch Series 6 uHermes Edition. I-TAG Heuer smartwatches ngumzekelo ogqibeleleyo wokusebenza okubingelelwe egameni lefashoni. Ushicilelo lweHermes Apple Watch alunikeli nayiphi na into esebenzayo, kodwa ayongezi nayiphi na into eyongezelelweyo, ukhetha ukwahlula ngokwawo ngezinto zepremiyamu kunye nexabiso eliphezulu.
Ngaba kufanelekile? Konke kuxhomekeke kwiimfuno zakho. Ukuba xa ufunda oku uye wabona ii-smartwatch okhe wazikhangela, kodwa ifowuni yakho khange ihambise ngendlela obufuna ngayo, emva koko unokufuna iwatchwatch.
I-Smartwatch vs band yokomelela
Kuya kufuneka ukhumbule into ibenye xa kufikwa kwezi ndidi zimbini zezixhobo ezinxitywayo: enye izama ukuyenza yonke; enye ijolise kwezemidlalo. Ibhendi yomzimba yenza oko igama layo liyicebisayo-ilinganisa ukubetha kwentliziyo yakho, ilandelele amanyathelo akho, ibala iikhalori zakho ezitshisiweyo, iyavuma ukuba uyabaleka okanye unyuka izitepsi kwaye ubala nako.
Amaqela omzimba ofanelekileyo nawo anemida yesaziso esilinganiselweyo, ubukhulu becala ukungcangcazela kwaye ikubonise ukuba loluphi uhlobo lwesaziso osandul 'ukusifumana kwifowuni yakho, kodwa uhlala ungenakukufunda oko ikuthethayo. Ukuba unomdla kuphela kwi-smartwatch ngenxa yeempawu zayo zokuzilolonga, mhlawumbi ungcono ngebhanti yokomelela komzimba.
Ii-Smartwatches zikunika into engenakwenziwa liqela lomzimba. Baza kukuvumela ukuba ufunde kwaye unxibelelane nezaziso zakho, uphendule okanye uxhome iifowuni, bakunike ulwazi malunga nemozulu, iindaba kunye nokuhamba kwakho kwizitrato. Uninzi lwazo zinonxibelelwano lweGPS yokulandela umkhondo kunye nokuhamba okungcono nayo, nto leyo engenzelwanga ziibhanti zokomelela. Ukuba ufuna ukunxiba okunengqondo, kuya kufuneka uthenge i-smartwatch.
Yeyiphi iwatchwatch ekufuneka ndiyifumene?
Okugqwesileyo ngokubanzi - Apple Watch Series 6
Le wotshi yeyona ilungileyo ngokwesoftware kunye nokusebenza. Ngokuqinisekileyo yi-smartwatch egudileyo kwimarike kwaye yenye yezona zinto zibalaseleyo ngokweempawu. I-Apple Watch Series 6 ihlala iboniswa kwaye iqhuba ii-watchOS 7. Ibhetri ihlala ijikeleza usuku, kuxhomekeke kwindlela osebenza ngayo. Uthotho lwe-smartwatch le-6 alunamanzi kwaye lunezinto ezahlukeneyo zeselfowuni, ezivumela ukuba zisetyenziswe ngokuzimeleyo kwi-smartphone yakho.
I-Apple Watch 6 yi-smartwatch ephezulu enikezelwa kwiinguqulelo ezahlukeneyo, kuxhomekeke kwizixhobo ezisetyenzisiweyo. Ixabiso liyahluka ukusuka kwi- $ 399 yohlobo lwenqanaba lokungena ukuya kuthi ga kwi-1499 yeedola kuhlobo lwayo olukhethekileyo lweHermes. Inguqulelo yeNike yeApple Watch 6 ikwafumaneka. Unokufunda eyethu uphononongo lweApple Watch Series 6 .
Eyona smartwatch yomzimba ilungileyo -Garmin Vivoactive 4
Le smartwatch egxile kwezempilo ebonelela nge-24/7 yokulandelela ioksijini yegazi, ukuhambisa amanzi kunye nokubila ukulahleka kokulandela kunye nokuphefumla. Inomzimba ongenazintsimbi kwaye uhlala uboniswa. I-Vivoactive 4 iqhuba i-OS ye-Garmin ye-OS kwaye inokuba nje yi-smartwatch enezona mpawu zokomelela kwimarike.
Kukho uhlobo oluncinci lwewotshi ebizwa ngokuba yiGarmin Vivoactive 4s. I-Garmin Vivoactive 4 kunye ne-Vivoactive 4s zibiza i- $ 349 kwaye ziza ngemibala eyahlukeneyo onokukhetha kuyo.
Elona xabiso liphezulu lemali yewatchwatch- Apple Watch SE
Le wotshi sisiseko sokugqibela se-5 Apple Watch, thabatha okusoloko kubonisiwe, kunye neprosesa entsha kunye nomzimba ongenazintsimbi ufumaneka kuthotho lwe-6. Usalufumana uninzi lweempawu ozifumanayo kumaxabiso abiza kakhulu kwi-Watch 6, kubandakanya uyilo olungena manzi kunye nokwahluka ngokudityaniswa kweselula.
I-Apple Watch SE nayo inenkqubo efanayo yokusebenza kunye noyilo lwangoku njenge-Series 6. Umzimba we-Apple Watch SE wenziwe ngealuminiyam kwaye kukho iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo zewristband. Unokufunda eyethu uphononongo lwe-Apple Watch SE .
$ 279Thenga kwiApple
$ 279Thenga kwiBestBuy
$ 279Thenga kwiithagethi
Ezona meko ze-Samsung Galaxy S9 / S9 + zibalaseleyo: ukusuka kumzimba omncinci ukuya kumbhoxo
Umhla wokukhutshwa kwe-Samsung Galaxy Watch Active 4, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
I-Android 12 inokubonisa imeko ye-hibernation yeeapps ezingasetyenziswanga
Umphathi we-Apple u-Tim Cook uza kuba yiarhente yasimahla ekupheleni konyaka olandelayo